अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी सागर भट्टराई पक्राउ ! कारण यस्तो..::Leading Nepal News
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी सागर भट्टराई पक्राउ ! कारण यस्तो..
साउन १९, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा केही दिन अघि दुई नेपालीको ज्यान जाने गरी दुर्घटनाभएको कारका चालक सागर भट्टराई पक्राउ परेका छन् । दुर्घटनापछि नेपाल फर्कन लागेको अवस्थामा अष्ट्रेलियन प्रहरीले उनलाई विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएका हुन् । उनीमाथि लापारवाहीपूर्वक कार चलाएको आरोप छ । साथै मान्छेको ज्यान जाने गरी सवारी चलाएको अभियोग पनि भट्टराईमाथि लगाइएको छ । उनको जमानात समेत खारेज गरिदिएको छ । उनलाई शनिवार नै पारामाटा कोर्टमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा कङ्गारु अगाडि आएको र त्यसलाई बचाउन खोज्दा दुर्घटना भएको भट्टराइले बताएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा पाँच जना सवारमध्ये एकजनाले सिट बेल्ट नलगाएको पाइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस ..किन गुमाउँछन् अष्ट्रेलियाको सडकमा नेपालीले ज्यान,सडक दुर्घटना बढ्नुकाे कारण के हाे ? अष्ट्रेलियामा विभिन्न दुर्घटनामा मृत्यु हुने नेपालीहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । बिदाको दिन रमाइलो गर्न बाहिर निस्केका नेपाली विद्यार्थीहरु केहि समुन्द्रमा डुबेर मृत्यु भएका छन् भने केहि सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका छन् । केहि दिन अघिमात्र अष्ट्रेलियामा दुई जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । सिड्नीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी स्नोइ माउन्टेनमा हिउँ खेल्न जाने क्रममा कोमामा कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । कारमा पाँच जना सवार थिए । स्यबाङ्जा वालिङ नगरपालिका १० की समीक्षा सुवेदी र गल्याङ नगरपालिका ६ का गोपाल भण्डारीको मृत्यु भएको छ । सिड्नीबाट शनिबार साँझपख हिँडेको नेपाली विद्यार्थीको टोली राति उडन रिजर्भमा गएर क्याम्पिङ गरेर बसेको थियो । पन्ध्र जना विद्यार्थीको समूह तीन वटा कारमा हिउँ खेल्न सिड्नीबाट स्नोइ माउन्टेन गएका थिए । बिहान दुई बजेतिर नै उठेर एउटा कारमा स्नोइ माउन्टेनतिर लागेका थिए । सोही समूहको कार बिहान पखको तीन बजे तीस मिनेट जाँदा दुर्घटनामा परेको थियो
अष्ट्रेलियामा सडक दुर्घटना बढ्नुको कारण के हो ? अष्ट्रेलियाको सडक विभागको तथ्याङ अनुसार गतवर्ष १२ सय जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । सन् २०१८ मा ११३७ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने सन् २०१९ को जुन महिनासम्म ६ महिनाको अन्तरालमा ६३५ जनाको मृत्यु भै सकेको छ । पछिल्ललो वर्षको तुलनामा यो १४ प्रतिशतले बढि रहेको छ । सडक दुर्घटनामा नेपालीहरु कतिले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्याङक नभएपनि वर्षेनी २-३ जनाले भने सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । जसमध्ये ज्यान गुमाउनेमा भरखरै आएका विद्यार्थीहरु रहने गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको सडकमा किन गुमाउनछन् नेपालीहरुले ज्यान- अष्ट्रेलियामा चारवर्षदेखि सवारी चलाउन सिकाई रहेका रजिष्टर प्रशिक्षक विष्णु सापकोटाको अनुसार अष्ट्रेलियाको सडकमा नेपालीहरुको ज्यान जानुको कारण यस्तो छ । नेपालीहरुको कमजोरको पहिलो कारण नेपालमा सिकेकै भरमा साथीभाईको लहैलहैमा यहाँ आएर सडकको बारेमा जानकार नै नभई सिधै सडकमा गाडी लिएर निस्कनु । रोडको नियम बारे ज्ञान नहुँनु र अधिकांस १८- २० बर्षको उमेरका भाई बहिनीहरु नेपालमा अलिअलि चलाउ जानेकै भरमा यहाँ आएर सिधै चलाउन थाल्नु । साथीभाईहरु ४-५ जना मिलेर रमाईलो गर्दै ठूलो स्वरमा स्पिकर बजाउनु, या गीत गाएर चालकको माईन्डलाई डिष्टब गर्नु त्यो पनि एक कारण हो ।आफु घुम्न जानुअघि चालकको पूर्व तयारी नहुँनु जब गाडीमा चढेपछि मोबाईल लगायत अन्य कुराको चासो राख्नु । आफु लामो दुरीमा जानुअघि आफ्नो गाडीको कन्डिसन कस्तो छ ख्याल नगर्नु । -(नेपाल युवटुवको सहयोगवाट तयार गरिएको रिपोर्ट)
जापानमा केटीहरुका लागि यस्तो नक्कली ‘ब्वाइफ्रेन्ड’..!
अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भनेपछि..
अस्ट्रेलियाले थप १३ देशबाट कामदार भित्र्याउदै..
जापानमा गर्मीले ११ जनाको ज्यान लियो,६ हजारभन्दा बढी अस्पताल भर्ना..
अष्ट्रेलियामा कार दुर्घटनामा मृत्यु हुने दुई जना विद्यार्थी स्याङजाका..